मदन भण्डारीको जस्तै अर्को हत्याकाण्ड नहोला भन्न सकिँदैन, सचेत बनौं : प्रचण्ड | mulkhabar.com
June 30, 2019 | 7:25 am 76 Hits
काठमाडौं, १४ असार । –
नेकपाका अध्यक्ष एवम् पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मदन भण्डारीको जस्तै रहस्यमय हत्याकाण्ड फेरी घट्न सक्ने भएकाले त्यस विषयमा सबै सचेत बन्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा मदन भण्डारीको ६८ औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गम्भीरताका साथ उक्त भनाई राख्नुभएको हो ।
प्रचण्डले व्यक्त गरेको विचार :
पछिल्लो चरणमा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जसरी अवसान भयो, त्यो रहस्यमय छ, नियोजित छ भनेर भनेका छौं । तर, मैले अघि नै भनें, किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । कताकता, उहाँको गाडी चलाउने ड्राइभरको जसरी हत्या हुन गयो, त्यो पनि प्रमाण नष्ट पो हुन गयो कि भन्ने लाग्छ । उसलाई मात्र बचाइराख्न सकेको भए कुनै न कुनै दिन त्यो यर्थाथ बाहिर आउँथ्यो कि जस्तो लाग्छ । उसको पनि हत्या भयो ।
त्यसो हो भने कहिलेकाँही चिन्ता लाग्ने के हो भने आजभोलि हामी आफ्नो छाला बचाउन लाग्ने चिन्तामा त छैनौं ? अलि भाषा नरम गरेर, नरिसाउन् प्रतिक्रियावादी धेरै भन्नेतिर पो जान थालेका त छैनौं ? यो आरोप होइन, विचार गर्नुहोला । हामी त आजसम्म मारिएका त छैनौं । मदन कति वर्षमा ? ४०/४२ । हामी त अहिले ६०/६५/६८ हुँदैछौं । जे होस् मारिएका छैनौं । मारिन पनि सक्छौं । यहाँ विचारणीय छ ।
सिद्धियो भने देशको एकता खतरामा पर्ने वाला …..
मलाई चिन्ता भएर पनि मैले अलि जोड गरेर भनिराखेको छु, यो कुरा तपाईहरु सबैले बुझिदिनु भएन भने … । अब दुईटा नेताले मात्र बुझेर हुँदैन । हिजो त चुनावको बेला थियो, दुईटा नेताले एउटा घोषणा गरिदिएपछि ‘मिलेर चुनाव लड्ने, चुनाव जित्नुपर्छ’ भन्ने कुराले सहजरुपमा कुदायो । तर, अब पार्टी निर्माण, सरकारलाई सफल बनाउने, जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रक्रियामा सबैको समान बुझाई, चिन्ता र सामुहिक चिन्ता भएन भने दुईटा नेता असफल हुने खतरातिर जान सक्दैन भन्न सकिँदैन ।
बरु दुई पार्टी रहिरहेको भए एकले अर्कालाई दोष दिँदै कहिले को ठूलो, कहिले को ठूलो हुने सम्भावना थियो । अब त्यो पनि छैन । सिद्धियो भने दुबै एकचोटि… ।
यो पार्टी (नेकपा) सकिए पनि कांग्रेस छँदैछ नि, कांग्रेसले लिड गर्ला भन्ने स्थिति पनि नेपालमा छैन । कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीमा झगडा भएर फुटिदिए हाम्रो पालो आउँथ्यो भन्ने सोच्दै नसोचे हुन्छ । यो सिस्टम पनि जाने र देशको एकता खतरामा पर्ने वाला छ ।
तपाईहरु (कार्यकर्ताहरु) सबै आएर खत्तम छ नि भनेर सुनाइदिने … तपाईहरुले धेरै गर्नुभयो भने हामी पनि मान्छे नै हो, दिमाग खराब हुन्छ । तपाईहरु राम्रो गर्नुस्, हामी छौं भनेर प्रेरित गर्ने हो भने फेरि पहाडै बोकेर हिँड्न पनि हामी तयार छौं ।
काठमाडौं, ३ जेठ । तत्कालीन एमालेका महासचिव रहेका मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको ०५० साल जेठ ३ गते आजकै दिन…